ရိုးသားသူတစ်ဦး ဖြစ်ရန် ဤသို့ ၀မ်းမြောက်ခြင်း | အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်
တစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ဝိညာဉ်ကို လွှတ်မြောက်ပြီး ပျော်ရွှင်စေသည်
ကျွန်ုပ် ဘုရားသ္ခင်၏ နှုတ်ကပတ်၌ ယုံကြည်စိတ်ချခဲ့ပြီး
(ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လို သံသယရှိနိုင်တော့မှာလဲ?)
ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်၊ ဘယ်ခါမှစိတ်မပျက်ပါ။ (ကြည့်!)
ကျွန်ုပ် တာ၀န်ကို စိတ်နှလုံးရှိသမျှနှင့် ထိန်းသိမ်းနေ၊
ကျွန်ုပ်သည် အသွေးအသားနှင့် မဆိုင်တော့။
ဖြစ်နိုင်တာတစ်ခု! ကျွန်ုပ်လည်း မဆိုးပါ၊
ကျွန်ုပ် အစွမ်းနိမ့်ကျလည်း ရိုးသားသောစိတ်နှလုံး ရှိ၏။
ကျွန်ုပ်သည် အရာရာကို ဘုရားသ္ခင်၏အလိုတော်အတိုင်း
ဖြစ်ရန် လုံး၀ဆက်ကပ်ပါ၏။ (အား၊ မှန်၏!)
ကျွန်ုပ် သမ္မာတရားအတိုင်း ကျင့်ကြံ၊ ဘုရားသ္ခင်ကို နာခံ၍
ကျွန်ုပ် ပွင့်လင်းဖြောင့်မှန်ကာ ကောက်ကျစ်မှုမရှိ၊ အလင်း၌ နေပါ၏။
ရိုးသားသူတွေ၊ အမြန်လာကြ၊ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ပြောကြစို့။
လာစုရုံး၍ မိတ်ဆွေကောင်း များလို ပေါင်းစပ်လိုက်ကြ။
တစ်၊ နှစ်၊ သုံး၊ ငါတို့အပေါင်းဟာ မိတ်ဆွေစစ်များပါ။
သမ္မာတရားကို ချစ်မြတ်နိုးသူအားလုံးဟာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ ဖြစ်ပေ။
အို ပျော်ရွှင်နေသော လူများ၊
ဘုရားသ္ခင်ကို ချီးမွမ်းဖို့၊ လာ၍ သီဆိုကကြကုန်။
ရိုးသားသူတစ်ဦး ဖြစ် မှဤသို့၀မ်းမြောက်ခြင်း!
ရိုးသားသူတစ်ဦး ဖြစ် မှ ဤသို့၀မ်းမြောက်ခြင်း!
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရူပါရုံ ကြည်လင်၏!
ဘယ်တော့မှ နောက်မဆုတ်၊ ဘယ်ခါမှစိတ်မပျက်ပါ။
(သမ္မာတရားကို သိနားလည်ရန် အလွန်ကောင်းပေ၏!)
ကျွန်ုပ် တာဝန်ကို စိတ်နှလုံးရှိသမျှနှင့် ထိန်းသိမ်းနေ၊
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသတ္တဝါလို နေထိုင်ကြရ၏!
အား၊ ရိုးသားတဲ့ စိတ်နှလုံးသား၊ အလွန်အဖိုးထိုက်သား!
ဒါဟာ ကျင့်ဆောင်ရန်လမ်း မဟုတ်လား?
ကျွန်ုပ် သစ္စာရှိစွာ ကျင့်ကြံ၊ ဘုရားသ္ခင်ကို နာခံ၍
(ဘုရားသ္ခင်က ကျွန်ုပ်တို့မှ များစွာမတောင်း)
ဘုရား၏ ဘုန်းတော် ထင်ရှားစေပါ!
ရိုးသားသူတွေ၊ အမြန်လာကြ၊ စိတ်နှလုံးမှ စိတ်နှလုံးသို့ ပြောကြစို့။
ရိုးသားသူကို မကြိုက်သူရယ် မရှိ၊ မှန်လား?
ကောက်ကျစ်သူတွေဟာ ရွံရှာဖို့ အလွန်ကောင်း၏! အူး!
အရှေ့သို့- ဘုရားအပေါ်ထားရှိသောချစ်ခြင်း ဘယ်တော့မှ မပြောင်းလဲပါ
နောက်တစ်ခုသို့- ဘုရားကို စိတ်ရင်းအတိုင်း ချစ်တဲ့ သူတွေအားလုံးက ရိုးသားတဲ့လူတွေသာ ဖြစ်တယ်